Samuel Eto’o oo noqonaya ciyaaryahanka ugu mushaarka badan aduunka (VIDEO) – SBC
Samuel Eto’o oo noqonaya ciyaaryahanka ugu mushaarka badan aduunka (VIDEO)
Posted by editor on Agoosto 22, 2011 Comments
Samuel Eto’o ayaa noqonayaa ciyaaryahanka ugu mushaarka aduunka ciyaaraha kubada cagta ka dib markii uu ku biiray kooxda Anzhi Makhachkala ee ka mid horyaalka wadanka Ruushka.
Samuel Eto’o ayaa kaga tagay garoonka Sen Serio ee kooxda Inter ay la wadaagto AC Milan aduun lacageed oo gaaraya 38.9 (Sodon & sideed milyan sagaal boqol oo kun oo doolar) waxaana sanadkii uu qaadan doonaa 28.8 milyan (Sideed & labaatan milyan & sideed boqol kun oo doolar) isagoo heshiis sadex sano ah qiimahaasi kula joogi doono.
Eto’o wuxuu todobaadkii qaadan doona 500 kun oo doolar taasi oo ka dhigan in uu noqonayo ciyaaryahanka kubada cagta ee aduunka ugu mushaarka badan.
Qiimahan lacageed ee Eto’o uu ka qaadanayo kooxda Anshi wuxuu ku dhawaanayaa mushaarka ay qaataan Cristiano Ronaldo & Lionel Messi iyadoo labadood marka la isku daro lacagta ay qaataan sanadkii.
Cristiano Ronaldo ayaa isagu ahaa ciyaaryahanka ugu mushaarka badan sanadkii wuxuuna ka qaataa kooxda Real Madrid 17.3 milyan (Todoba & tobon milyan sadex boqol kun oo doolar, halka kaalinta labaad uu ku jiray Lionel Messi oo kooxda Barcelona ka qaataa 15.1 milyan (Shan & tobon milyan & boqol kun oo doolar).
Kooxda Anzhi waxay ka dhisan tahay Koonfurta wadanka Ruushka gaar ahaan gobolka Dagestan, waxaana iska leh milyuneerka saliida ka taajiray Suleiman Kerimov.
Samuel Eto’o oo 30 sano jir ah wuxuu horey ugu guuleystey sadex koob oo Champions League ah isagoo laba la qaaday Barcelona halka midka kalena uu la qaaday kooxda Inter.
Kooxda Makhachkala waxaa si weyn u saameeya hawlgalada iska caabinta & weerarada ku dhufoo ka dhaqaaqa ah ee ay wadaan dagaalyahanada Islaamiga ah ee doonaya in gobolkaasi Dagestan uu ka go’o dalka Ruushka intiisa kale, iyadoo sidoo kale gobolka uu daris la yahay gobolka Chechnya oo ay ka socdaan dagaalo ay wadaan kooox Islaami ah.
Anzhi Makhachkala hantida ay haysato waxaa ka mid ah oo la yaab leh inay ku sameyso tababarka duleedka magaalada Mosco ee caasimada ah, isla markaana marka ay leedahay ciyaaraha guriga (Home Games) in ay gobolkeeda diyaarad lagu qaado ciyaaryahanada iyadoo gooya masaafo gaaraya 1250 mile, waxaana sidaasi dhacdaa 15 jeer xili ciyaareed kasta.
Suleiman Kerimov waxaa wargeyska ka faalooda arimaha dhaqaalaha aduunka ee Forbes uu ku sheegay hantidiisa 7.8 billion oo doolar, waxaana uu noqdey qofka 118-aad ee aduunka ugu taajirsan isgaoo ay isla noqdeen booskaasi Ra’isalwasaaraha Talyaaniga Silvio Berlusconi & qoyskiisa.
Kooxda Anzhi waxay haatan ku hawlan tahay isdhisid waxaa captain kooxda u ah 38 jirka Roberto Carlos oo xili ahaa daafaca dhanka bidix ee Brazil ee aadka u ada.
Sidoo kale waxay dhawaan la wareegtey ciyaaryahan Yuri Zhirkov oo ka mid ahaa kooxda Chelsea ee London ka dhisan, waxaa kale oo ay doon doonaysaa daafaca dhanka bixid ee kooxda Barcelona Danial Alves.
Iibka Eto’o ee kooxda Anzhi wuxuu noqonayaa mid ka mid ah iibsiga ugu qaalisan ee ciyaaryahanada sanadkan iyadoo xili ciyaareedkan kala iibsiga ciyaartoyda qiimaha lagu kala gatey uu kaalinta koowaad ka noqdey ciyaaryahan Sergio Aguero oo kooxda Atletico Madrid ay ku wareejisay Manchester City qiime gaaraya 62 milyan oo doolar, waxaa kale oo uu noqdey qiimahaasi kii ugu badnaa ee abid Manchester City ay ku iibsato ciyaartoy.
Waxaa kale oo kaalinta labaad noqdey Javier Pastore oo kooxda Javier Pastore ee Faransiiska ay kaga iibsatey kooxda Talyaaniga ee Palermo.
Arsenal ayaa sidoo kale Cesc Fabregas dib ugu celisay kooxdii uu ka yimid ee Barclona ka dib markii ay ku iibisay aduun lacageed oo gaaraya 42 milyan oo doolar.
DAAWO SAWIRADA Video ku saabsan qaab ciyaareedka Eto’0